မောင်တော. ARSA – Eleven Media Group
Tag: မောင်တော. ARSA
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်း ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေတွေအပြီး ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သတင်းရယူနိုင်ဖို့အတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် မီဒီယာအချို့ကို လိုက်ပါသတင်းယူနိုင်ကြောင်း ဖိတ်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဖိတ်ကြားမှုကို လိုက်ပါသတင်းယူရာမှာ လိုက်ပါမယ့်သတင်းဌာနက ခရီးစဉ်အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်၊ တည်းခိုစရိတ်နဲ့ အစားအသောက်ကို မိမိတို့ဘာသာ အကုန်ကျခံရမှာဖြစ်ပြီး သတင်းယူရန်အတွက် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ လုံခြုံရေးကိုတော့ ခေါ်ယူသူတွေဘက်က တာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ်ဖိတ်ကြားလာတာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သတင်းမှန်ရယူနိုင်ဖို့အတွက် လိုက်ပါဖို့ အမည်စာရင်းပေးသွင်းပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေတွေအတွက် ပြည်သူတွေကို တင်ပြဖို့ လိုက်ပါသတင်းယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
မောင်တောဒေသကို သတင်းရယူမယ့် ပြည်တွင်းအခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက လိုက်ပါမယ့်သူတွေဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ် ၂၉ ရက် ညနေပိုင်းမှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကနေတစ်ဆင့် စစ်တွေလေဆိပ်ကို လေကြောင်းခရီးနဲ့ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခရီးစဉ်မှာတော့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဦးဆောင်ပြီး သတင်းရယူမယ့်အစီအစဉ်နဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ရှင်းလင်းပါတယ်။ မောင်တောဒေသ အခြေအနေကို လိုက်ပါသတင်းယူတဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေအနေနဲ့ Eleven Media Group၊ MRTV၊ NPE၊ MITV၊ Myanmar Times၊ MRTV 4၊ Mizzima၊ Irrawaddy၊ The Voice၊ Frontier Myanmar၊ Hot News၊ Sky Net နဲ့ Myanmar press photo Angency တို့ကနေ လိုက်ပါသူ စုစုပေါင်း ၁၄ ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ကိုတော့ MRTV က ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက ဦးဆောင်သွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတ် ၃၀ ရက် နံနက်အစောပိုင်းမှာ စစ်တွေမြို့ ရေချမ်းပြင်ကတစ်ဆင့် အငူမော်ထိကို ရေကြောင်းခရီးနဲ့ တစ်နာရီကျော်ကြာ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး အငူမော်ဆိပ်ကိုအရောက်မှာ သတင်းရယူမယ့် ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကို မောင်တောခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လုံခြုံရေးရယူပေးမယ့် မောင်တောမြို့မရဲစခန်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့က လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အငူမော်ကနေတစ်ဆင့် မောင်တောကို ကားနဲ့နှစ်နာရီကျော်၊ သုံးနာရီနီးပါး သွားရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ လမ်းခင်းခြင်း လမ်းပြုပြင်ခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့် ခရီးတစ်လျှောက်လုံး ဖုန်တစ်လုံးလုံးနဲ့ လမ်းကြမ်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက် မောင်တောကို မနက် ၁၁ နာရီကျော်မှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
မောင်တောကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ ခရီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့အတွက် မောင်တောခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မောင်တောဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
မောင်တောဒေသမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရတာတွေ၊ လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်ခဲ့တာတွေနဲ့ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ထွက်သွားတဲ့သူတွေ ပြည်တွင်းကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေနိုင်ပေမယ့် အခုအချိန်အထိ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်း မရှိသေးတာတွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အခုခရီးစဉ်ကို သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းသွားဖို့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရောက်နေကျနေရာ၊ ယူနေကျသတင်းနဲ့ မလုံခြုံသေးတဲ့ အခြားနေရာတွေ မီဒီယာသမားတွေက ငွေကုန်ကြေးကျခံလိုက်ခဲ့ရပေမဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်ပေးတဲ့ဒီခရီးစဉ်ဟာ အရင်ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ ထပ်တူနီးပါးဖြစ်နေလို့ အခြားသောနေရာတွေကို သွားရောက်သတင်းရယူနိုင်ဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်း အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနိုင်ခြင်း မရှိတာကြောင့် မသွားရောက်ဖို့ ပြောကြားခဲ့တာကြောင့် ပြန်ကြားရေးဘက်က မူလစီစဉ်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်အတိုင်းသာ သွားရောက်သတင်းရယူခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ခရီးစဉ်ထပ်တူတွေပဲ စီစဉ်နေမယ်ဆိုရင် နောင်လာမယ့် ရခိုင်ခရီးစဉ်တွေမှာ သတင်းလိုက်ပါယူမယ့် မီဒီယာတွေနဲ့ သတင်းသွားရောက်ယူမယ့်နေရာတွေကို ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဖို့လိုကြောင်း သတင်းမီဒီယာတွေဘက်က ပြောဆိုခဲ့ရပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်စိုက်ထုတ်ပြီး လိုက်ပါသတင်းရယူရတဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေအတွက် ခရီးစဉ်တိုင်းက ဖော်ပြပြီးသား သတင်းတွေချည်း အထပ်ထပ်အခါခါ ပရိသတ်ကို တင်ဆက်လို့မရသလို ပြည်သူတွေကလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ရခိုင်ခရီးစဉ်တွေ ခေါ်ပါတယ်။ ကြေညာတိုင်း ဒီနေရာ၊ ဒီပုံစံ၊ ဒီသတင်းပဲမြင်နေရရင် သတင်းထိမ်ချန်တယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိသေးဘူး။ မလုံခြုံသေးဘူးလို့ပဲ မြင်ကြမှာပါ။ ဒါ့အပြင် နောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်ဒေသခရီးစဉ်တွေကို တစ်လနှစ်ကြိမ်အထိ သွားရောက်သတင်းယူကျဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ကြားသိရပြီး အဲဒီလိုယူရာမှာ ပြန်ကြားရေးအနေနဲ့ တည်ငြိမ်လာတဲ့ နေရာဒေသအသစ်တွေနဲ့ ကျေးရွာအသစ်တွေဆီ ပို့ဆောင်ပေးမယ့် အခြေအနေ၊ နေရာဟောင်းတွေမှာပဲ သတင်းယူခွင့်ရမှာလားဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကို ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေကို ကြိုတင်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အဲဒီလိုတွေ့ဆုံပြီးမှ လုံခြုံရေးအရလုံးဝသွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာ၊ မီဒီယာတွေကလည်း သတင်းတည်ဆောက်လို့ရမယ့် အခြေအနေတွေကို အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းပြီး သွားရောက်မှသာ ခရီးစဉ်က ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ် ကျေးလက်တစ်ခုမှ ဒေသခံများအား တွေ့ရစဉ်
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ လူတစ်စုဆီက သတင်းယူခဲ့ရတယ်
မီဒီယာသမားတွေနဲ့ မောင်တောခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာတော့ ပြန်ကြားရေးဘက်က စီစဉ်ထားတဲ့ မောင်တောဒေသမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အိုးထိန်းကျေးရွာ၊ လှဖိုးခေါင်ကြားစခန်း၊ ပန်းတောပြင်ဒေသတွေမှာ သတင်းသွားရောက်ရယူဖို့အတွက် သတင်းသမားတွေဟာ ပြန်ကြားရေးဘက်က စီစဉ်ပေးထားတဲ့ကားနဲ့ တစ်စီးကိုလေးယောက်၊ ငါးယောက်နှုန်းနဲ့ ကားငါးစီးနဲ့ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မီဒီယာတွေ လိုက်ပါလာတဲ့ကားတွေရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာတော့ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကားတွေရဲ့ကားက ရှေ့ပြေးမောင်နှင်ပေးပြီး ကားပေါ်မှာတော့ အရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ အခြားအဆင့် ငါးယောက်လောက်နဲ့သာ လိုက်ပါလုံခြုံရေးရယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး လမ်းတစ်လျှောက် လမ်းဘေးဝဲယာမှာတော့ နယ်ခြားစောင့်တပ်က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်က လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တဲ့အခြေနေရှိခဲ့ပါတယ် လုံခြုံရေးယူတယ်ဆိုရာမှာလည်း မြင်ခဲ့ရတာတစ်ခုက လမ်းပိုင်းတစ်ခုမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊ နှစ်ဦးနှုန်းနဲ့ နေရာခပ်ကျဲကျဲမှာ လုံခြုံရေးရယူပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ နေရာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြားမှာ လှမ်းအော်ရုံနဲ့ မကြားနိုင်သလို လူတစ်ဦးချင်း၊ နှစ်ဦးချင်းပဲ လုံခြုံရေးချထားနိုင်တဲ့အင်အားက တကယ်ပဋိပက္ခထပ်ဖြစ်ရင် ကာကွယ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို အတွေးရောက်လာပါတယ်။ ဒီလိုအတွေးဟာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးပေမဲ့ လုံခြုံရေးစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာ လုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့သွားနေရတဲ့ သတင်းသမားတစ်ဦးရဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်ပြီး မလုံခြုံမှုတွေ အကြောက်တရားတွေနဲ့ ရှင်သန်နေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နေရာမှာ ငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ ဖိစီးမှုလေးအခိုက်အတန့် ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။
သတင်းရယူဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ ပန်းတောပြင်ဟာ မကြာခဏ သတင်းရယူနေတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့် ပန်းတောပြင်အစား ပန်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုဘက်မှာ နေထိုင်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ အစိုးရပိုင်းက ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို မေးမြန်းခဲ့ကြပြီး အဲဒီကနေတစ်ဆင့် အိုးထိန်းကျေးရွာကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနဲ့ မြိုတိုင်းရင်းသားတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီလို သွားရောက်သတင်းရယူရာမှာတော့ ပြန်ကြားရေးကပြောတဲ့အတိုင်း မြေပြင်အခြေနေကို အမှန်တကယ် ကွင်းဆင်းလေ့လာ သတင်းရယူခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ရောက်ရှိရာကျေးရွာထိပ်မှာ ကြိုတင်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ လူတစ်စုဆီမှာသာ မေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပြီး သူတို့ဖြေသမျှပြောသမျှကိုသာ နားထောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုမေးမြန်းရာမှာလည်း အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ လုံခြုံရေးယူပေးထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ၊ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေ၊ စရဖ (စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့) ကလို့ ယူဆရတဲ့ သတင်းလိုက်ပါရယူသူတွေ ရှိနေတာကြောင့်လည်း ဖြေဆိုသူတွေဟာ အကြောက်တရားတွေရှိနေပြီး ရင်ထဲကရှိသမျှကို မဖြေရဲကြဘူးလို့ယူဆရပြီး မေးမြန်းနေတဲ့ မီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်း အကန့်အသတ်တစ်ခု ရှိနေတယ်လို ခံစားနေရကာ ဒေသခံတွေကို မေးမြန်းပြီး သတင်းအချက်လက်ရယူရာမှာ လွတ်လပ်မှုမရှိခဲ့ရပါဘူး။
သတင်းသမားတွေဟာ နယ်မြေအခြေအနေကို သတင်းရယူရမှာ ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အခြေအနေကို သတင်းရယူလိုကျတာဖြစ်ပြီး ရွာတွေကိုသတင်းယူဖို့ဆင်းရာမှာ အခုလို ကြိုတင်စောင့်ဆိုင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရွာထဲဆင်းပြီး သူတို့လှုပ်ရှားနေတာတွေကို သဘာဝကျကျသတင်းယူလိုပေမယ့် သတင်းရယူရမယ့် ရွာတစ်ရွာကို ရောက်ပြီဆို ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့လူတွေက စောင့်ဆိုင်းနေပြီး ဖြေကြပါတယ်။ အဲဒီလို လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေရာမှာလည်း အမျိုးသားတွေကိုပဲတွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ မပါဝင်ပါဘူး။ အဲဒီလို ကြိုတင်စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေရဲ့ ဖြေကြားမှုဟာ သူတို့ရဲ့ တကယ့်ပကတိအခက်ခဲတွေ၊ ရင်ထဲကဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့လည်း သံသယ၀င်မိပါတယ်။ ဘာလို့သံသယ၀င်ရလဲဆိုရင် သတင်းရယူရာမှာ ကြိုတင်စီစဉ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ဖြေကြားဖို့ကိုရော ကြိုတင်သင်ကြားပေးထားသလားလို့လည်း တွေးထင်မိပါတယ်။ ဒီလိုခံစားမှုဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာသမားတိုင်း ဖြစ်နေရတဲ့ခံစားမှုပါ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်ပေးတဲ့ခရီးစဉ်တိုင်းလိုလိုမှာ စီစဉ်ပေးထားတဲ့သူတွေကပဲ ထွက်ထွက်ပြီးဖြေနေတဲ့ပုံစံမျိုးဟာ မောင်တောဒေသ တကယ်ပဲအေးချမ်းနေလို့လား။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးနောက်မှာ ဖုံးကွယ်ထားချင်တာမျိုး ရှိနေသလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဝင်နေကြတာကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ သတိပြုမိဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး သတင်းသမားတွေဟာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ စောင့်ဆိုင်းမှုမရှိဘဲ ရွာအတွင်းကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွား၊ သူတို့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြေဆိုနိုင်မှ မီဒီယာသမားတွေဟာ သူတို့တာဝန်ကျေတယ်ထင်ပြီး ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို အကောင်းမြင်တင်ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်တင်ဆက်တာ မဟုတ်ရင်တောင် အကြောက်တရားနဲ့ သင်ကြားထားတဲ့အတိုင်း နှုတ်တိုက်ဖြေနေတာထက် လွတ်လပ်စွာပြောနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကပဲ အမှတ်ပြည့်ရနိုင်မယ်ဆိုတာ တာဝန်ရှိသူတွေ သတိပြုမိစေလိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သတင်းသမားတွေကို ကျေးရွာထဲထိမပို့ဘဲ ကြိုတင်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့နေရာက လူတွေကိုသာ မေးမြန်းဖို့ ဒီလိုစီစဉ်ပေးထားတာဟာလည်း လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်လား၊ ကျေးရွာက ပကတိအခြေအနေတွေကို မီဒီယာတွေကို မမြင်စေချင်တာလား ဆိုတာကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။
ကျေးရွာတွေမှာ သတင်းယူရာမှာလည်း တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကို နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီ သွားရောက်ရပြီး လမ်းခရီးကြမ်းတမ်းသလို သွားရလာရ ဝေးလံပေမယ့်လည်း သတင်းယူရမယ့် နေရာရောက်တာနဲ့ သတင်းရယူရချိန်ဟာ အများဆုံး ၁၅ မိနစ်သာ ရခဲ့ပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်ဆိုတာဟာ အများဆုံးပါ။ တချို့နေရာတွေမှာ ငါးမိနစ်လောက်နဲ့ သတင်းရယူရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို တိတိကျကျနဲ့ အဖြစ်မှန်အတိုင်း သတင်းတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် အချိန် ၁၅ မိနစ်ဆိုတာ လုံလောက်တဲ့အချိန် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ စီစဉ်တဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မသိဘူးလားဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာကြောင်း သုံးသပ်ရပါတယ်။
ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပေမယ့် ဆယ့်ငါးမိနစ်ဆိုတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာမှာ ခြေခြေမြစ်မြစ် သတင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ တိကျခိုင်လုံတဲ့ သတင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ မလုံလောက်ဘူးဆိုတာကို သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သေချာသိနေမှာပါ။
ခရီးစဉ်မှာ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာရဲ့ ခရီးစဉ်ကြမ်းတမ်းမှု ခရီးဝေးကွာပြီး သွားလာချိန်ကြာမြင့်မှုတွေကြောင့် အချိန်ကိုငဲ့ကွက်ပြီး သတင်းယူဖို့အချိန်ကို ကန့်သတ်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ၁၅ မိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့ သတင်းတစ်ပုဒ်အတွက် အလွန်နည်းတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့် ပြန်ကြားရေးဘက်က နောက်ထပ်စီစဉ်မယ့် ရခိုင်ခရီးစဉ်တွေမှာ ဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး သတင်းတည်ဆောက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုသလို သတင်းရယူရမယ့် မြေပြင်အခြေအနေမှာလည်း ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ လူတချို့ကို မေးမြန်းဖို့စီစဉ်ပေးထားတာထက် ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သတင်းသမားတွေရဲ့ ကားတန်းနဲ့အတူ ပြည်ထဲရေးနဲ့တပ်မတော်က သတင်းတပ်ဖွဲ့တွေ သတင်းလိုက်ပါယူတဲ့အခါမှာ တချို့အရာတွေကို စီစဉ်တဲ့ပြန်ကြားရေးဟာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုထားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သတင်းလိုက်ပါယူတဲ့အခါမှာ လှေဆိပ်အဆင်းအတက်၊ ကားတန်းအသွား အတက်အဆင်းတွေ၊ မီဒီယာသမားတွေ သတင်းရယူနေတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းယူရုံနဲ့တော့ သတင်းသမားတွေကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်စားနေတဲ့ သတင်းသမားတွေ ထမင်းစားနေတာကအစ မှတ်တမ်းယူနေတာကတော့ မဖြစ်သင့်တာကြောင့် ပြန်ကြားရေးအနေနဲ့ တားမြစ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မတ် ၃၁ ရက်မှာတော့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း တောင်ပြိုလက်ဝဲကို သွားရောက်သတင်းရယူပြီး လမ်းတစ်လျှောက်က နယ်ခြားစောင့်စခန်းတွေ ဆောက်နေတာတွေကို ပြသခဲ့သလို တစ်ဖက်က၀င်လာမယ့်သူတွေကို လက်ခံမယ့် လက်ခံရေးစခန်းက ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို လိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နယ်နိမိတ်မျဉ်းပေါ်မှာ နေထိုင်သူတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို လိုက်လံပြသပြီးနောက်မှာ မောင်တောကို ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
မောင်တောခရီးစဉ်ကို သတင်းသွားရောက်ရယူရာ လမ်းတစ်လျှောက်ဝဲယာမှာ အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ပျက်စီးနေတဲ့ လူနေအိမ်တွေ၊ မီးလောင်ပျက်စီးနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ နယ်ခြားစောင့်စခန်းတွေမှာလည်း ခြံစည်းရိုးကို ပိုမိုလုံခြုံစွာ ကာရံထားတဲ့အခြေအနေတွေ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ပြည်တွင်းကနေ ထွက်ခွာသွားသူတွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရင် ထားရှိဖို့ဆာက်လုပ်နေတဲ့ အဆောက်အအုံတွေကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရသလို အရင်တုန်းက ဒေသခံတွေ သွားလာလှုပ်ရှားပြီး လူစည်ကားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ အဆောက်အအုံအပျက်တွေ မီးလောင်ထားတဲ့ ကွင်းပြင်တွေသာ လမ်းတစ်လျှောက်မြင်တွေ့ခဲ့မှုဟာ ရခိုင်မြေအတွက် စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် အရုပ်ဆိုးတဲ့မြင်ကွင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တစ်ဖက်နိုင်ငံကို အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ထွက်ပြေးသွားသူတွေကို ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်က ပြန်လည်လက်ခံမှု စတင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုချိန်အထိ ပြန်လည်ဝင်ရောက် နေထိုင်သူတွေမရှိသေးသလို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေ နေထိုင်ဖို့ နေအိမ်တွေကို တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက် အစိုးရအဖွဲ့တွေက လှူဒါန်းထားပြီး စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းတွေအပါအ၀င် လူနေမှုအတွက် လိုအပ်နေတာတွေကို ဆောက်လုပ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် အချို့နေရာတွေမှာတော့ ဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး မပြီးစီးသေးတာတွေလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေကို ခေါ်ယူပြီး သတင်းလိုက်ပါရယူခွင့် ပြုနေတယ်ဆိုပေမယ့် လက်ရှိအချိန်အထိ စီစဉ်ပေးသမျှခရီးစဉ်တွေက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတဲ့ရသကို သတင်းသမားတွေ ခံစားရတယ်လို့ မမြင်မိသေးသလို ဒီခရီးစဉ်တွေ စီစဉ်ပေးမှုကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေက အစိုးရလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အကောင်းမြင်ထောက်ခံရေးသားနေတာမျိုး ဟုတ္တိပတ္တိမတွေ့ရသေးခြင်းဟာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အစိုးရကစီစဉ်တဲ့ သတင်းယူခွင့်ခရီးစဉ်တွေရဲ့ အားနည်းချက်ကို ညွှန်းဆိုနေပါတယ်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခပြန်လည်ဖြစ်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို စွပ်စွဲချက်မျိုးစုံ ဆင့်ကဲဖြစ်လာချိန်မှာ သာမန်ပြည်သူတွေတောင် သိခဲ့ကြတာ သုံးသပ်ခဲ့ကြတာက မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရခိုင်အရေးမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ မီဒီယာထောင်ချောက်ထဲမှာ ပိတ်မိသွားပြီး မီဒီယာစစ်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ပါ။
ဒီလိုမီဒီယာစစ်ပွဲမှာ ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အရေးနိမ့်ခဲ့ရတာကို အစိုးရအနေနဲ့ ပြန်ပြီးအဖတ်ဆည်ချင်တယ်။ ရခိုင်အရေးမှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူတွေကို ကြိုးစားပမ်းစားလက်ခံနေပြီဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး နိုင်ငံတကာက သိရှိစေချင်တယ်ဆိုရင် လက်ရှိသတင်းယူဖို့ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲပေးပါလို့ ပြန်ကြားရေးရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ သတင်းလိုက်ပါယူသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ တင်ပြချင်သလို ရခိုင်ပြည်နယ် အေးချမ်းပါစေလို့လည်း တစ်ဆက်တည်း ဆုတောင်းမိပါတယ်။
Posted in Headline, PoliticsTagged မောင်တော. ARSA, မောင်တောမြို့နယ်LeaveaComment on မောင်တောက ပြန်ခဲ့တယ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပေးပို့ထားသည့် လူဦးရေစာရင်း ၈၀၀၀ ကျော်အနက် ၃၇၄ ဦးအား လက်ခံရန်အသင့်ရှိပြီး ကျန်လူဦးရေစာရင်းမှာ အချက်အလက်မပြည့်စုံသဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့ထား
Posted on March 15, 2018 by Eleven Media Group
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ ပေးပို့ထားသည့် လူဦးရေစာရင်း ၈၀၀၀ ကျော်အနက် စိစစ်ပြီးဖြစ်သည့် လူဦးရေ ၃၇၄ ဦးအား လက်ခံရန်အသင့်ရှိပြီး ကျန်လူဦးရေစာရင်းမှာ အချက်အလက်မပြည့်စုံသဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် မတ် ၁၄ ရက်ကပြုလုပ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေးဆိုင်ရာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးမြင့်သူက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“၈၀၃၂ ယောက်က ၃၇၄ ယောက် စိစစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပဲ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံရုံးကို ဒီစာရင်းကိုပို့ပေးလိုက်ပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒါကာမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကလည်း နိုင်ငံခြားရေးရုံးကို သွားပေးပါ့မယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာက ၃၇၄ ယောက်တော့ စိစစ်ပြီးပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ အမြန်ပို့ချင်ရင် ပို့လို့ရပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီကတော့ Ready။ ကျွန်တော်တို့စိစစ်ပြီးတဲ့သူ ၃၇၄ ယောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါ့မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီအချက်အလက်တွေ မပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက် ဒီရှစ်ထောင်ကိုတော့ သူတို့ပြန်ပြီးတော့ ပုံစံဖြည့်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်” ဟု အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှပေးပို့သည့် အိမ်ထောင်စု ၁၆၇၃ စုမှ လူဦးရေ ၈၀၃၂ ဦးအားစိစစ်ရာတွင် မတ် ၁၃ ရက်အထိ လူဦးရေ ၄၅၆ ဦးစိစစ်ထားပြီး ယင်းထဲ၌ အကြမ်းဖက်မှုတွင်ပါဝင်သူသုံးဦး စိစစ်တွေ့ရှိထားကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဌေးလှိုင်က ဆိုသည်။
တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီများကို ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပြိုလက်ဝဲနှင့် ငါးခူရစခန်းတို့တွင် ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်တွင် စတင်လက်ခံရန် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူထားသော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ ၀င်ရောက်လာသူမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရသည့်နေရာရှိ ခိုင်လုံစိတ်ချရသည့်သူများဆီမှ ရရှိခဲ့သည့်သတင်းများအရ အများစုသည် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စိတ်ကြောင့် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနောက်ပိုင်း တပ်မတော်က ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်သည့်အခါ ၎င်းတို့အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သံသယဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်း ပြန်ကြားရေးကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်းက ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ “ဒုတိယအကြောင်းကတော့ ARSA နဲ့ သူ့ရဲ့ထောက်ခံသူတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကြာင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အများအပြားဟာ ထွက်ပြေးဖို့အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တတိယအကြောင်းကတော့ ယင်းတို့အနက် အများအပြားဟာ တတိယနိုင်ငံတစ်ခုမှာ အခြေချခွင့်ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက စခန်းတွေမှာ စားဝတ်နေရေး ပိုမိုပြေလည်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ထွက်ပြေးဖို့ စည်းရုံးခံခဲ့ကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ဒုတိယ၀န်ကြီးက ဆိုသည်။
ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပြသသည့်အနေဖြင့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၇၀၀ ကျော်နှင့် မွတ်စလင်ဘာသာဝင် ၅၀၀ တို့ကို အမြန်ဆုံးခေါ်ယူရန်အတွက် စိစစ်ပြီး လူ ၁၂၀၀ ကျော်စာရင်းကို မြန်မာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရသို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက ပုံစံ ၈၀၀၀ ကျော်ကို ပြန်လည်ပေးပို့လာခဲ့ကြောင်း၊ အရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များနှင့် လက်ဗွေစစ်ဆေးမှုလုပ်ရန် လိုအပ်ချက်များ ပါမလာခဲ့ကြောင်းနှင့် အချက်အလက်များတွင် အိမ်ထောင်ဦးစီး၏လက်ဗွေ၊ ကိုယ်တွင်ထင်ရှားသည့် အမှတ်အသားနှင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်ဓာတ်ပုံတို့ ပါမလာခဲ့ကြောင်း ဒုတိယ၀န်ကြီးက ပြောကြားသည်။
Posted in NewsTagged ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မောင်တော. ARSALeaveaComment on ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပေးပို့ထားသည့် လူဦးရေစာရင်း ၈၀၀၀ ကျော်အနက် ၃၇၄ ဦးအား လက်ခံရန်အသင့်ရှိပြီး ကျန်လူဦးရေစာရင်းမှာ အချက်အလက်မပြည့်စုံသဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့ထား
နေရပ်စွန့်ခွာဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ ခရိုင်အရာရှိအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ လာရောက်ကြသူများက No Man Land ဧရိယာရှိ ဘင်္ဂါလီများအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်က သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ်
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ရှိ ဥပဒေအရ နေထိုင်ခွင့်မရှိသော No Man Land ဧရိယာတွင် လာရောက်နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီ ၆၅၀၀ ခန့်အား အကြမ်းဖက်သမားများပါရှိခြင်း ရှိ မရှိ စာရင်းကောက်ယူ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်က မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီး No Man Land ဧရိယာရှိ ဘင်္ဂါလီများကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းများအရ ယင်းအဖွဲ့တွင် ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် အကြမ်းဖက်သမားများပါဝင်သည်ဟု သိရကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဘက်က ကြေညာထားတဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေမှာပါတဲ့ လူ ၁၃၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ ဒီ ၁၃၀၀ ကျော်ထဲမှာ ပါမပါ။ နောက် ARSA ရဲ့ တချို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက သားသမီးတွေလည်းပါတယ်။ ဦးဆောင်တဲ့တစ်ယောက်က။ အဲဒီလိုသိရတယ်။ ဒါက ရဲဘက်ကသတင်းပေါ့။ အတည်တော့မပြုနိုင်သေးဘူး။ အဲဒါကို မနေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီး အဲဒီအဖွဲ့တွေကို သွားတွေ့တယ်။ ဒီအဖွဲ့တွေကို စာရင်းကောက်မယ်။ သူတို့ရဲ့ ဒေတာတွေရပြီဆိုရင် ဒီအထဲမှာ အကြမ်းဖက်သမား ပါ မပါ ပထမဆုံးစိစစ်မယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်ကပြုလုပ်သည့် မဏ္ဍိုင်ကြီးလေးရပ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ခေတ္တရပ်နားချိန်တွင် မီဒီယာများအား ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ခြံစည်းရိုးနှင့် Zero Line အကြား ၎င်းတို့နေထိုင်နေသည့် No Man Land ဧရိယာသည် နေထိုင်ခွင့်မရှိသည့်နေရာဖြစ်၍ မြန်မာဘက်မှ ဥပဒေအရရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်ပါက နိုင်ငံတကာဖိအားရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ထောက်ချောက်ဆင်သည့်အနေဖြင့် လာရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
“ဘာကိုရည်ရွယ်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တာကတော့ No Man Land မှာဝင်နေတယ်။ ရေရှည်နေနိုင်အောင် နောက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေက စားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးစသည်ဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပေးနေတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က No Man Land မှာနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က လုံခြုံရေးအတွက် ဥပဒေနဲ့အညီ ရှင်းရလင်းရမယ်။ ဒီ ၆၅၀၀ ကျော်က မြန်မာနိုင်ငံဘက်က လုံခြုံရေးအရ ဒီဘက်က ဆောင်ရွက်သင့်တာကို ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်ရွက်ချက်ကို အကြောင်းပြုပြီး နိုင်ငံတကာဖိအားတွေ ထပ်တိုးလာအောင် ထောင်ချောက်ဆင်ထားတာ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်က မစ,စအောင် သူတို့က အဲဒီနားမှာနေတယ်။ တောင်းဆိုချက်တွေထုတ်တယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကဘက်လာတဲ့ မီဒီယာတွေကို သတင်းအမှားတွေ မဟုတ်မမှန်တာတွေ ပြောတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဘင်္ဂါလီများမှာ ကမ္ဘာအ၀န်းသို့ ရောက်ရှိနေသော ဘင်္ဂါလီအားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံက ခြွင်းချက်မရှိပြန်လည်လက်ခံပြီး နိုင်ငံသားပေးရန်အချက်များအပါအ၀င် မဖြစ်နိုင်သောတောင်းဆိုမှုများကို ပြုလုပ်ထားကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
No Man Land ဧရိယာမှ ဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည်ထွက်ခွာစေရေးအတွက် မြန်မာဘက်မှ အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်ပါက နိုင်ငံတကာမှ ဖိအားပေးမှုများ ရှိလာနိုင်သည့်အတွက် ယင်းသို့ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပါအ၀င် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများမှ ဆွေးနွေးအဖြေရှာနေကြောင်းလည်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။
ယင်းတို့အနေဖြင့် မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့် ပြန်လာလိုသည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအကြား သဘောတူညီချက်များအရ စိစစ်လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in News, PoliticsTagged ဘင်္ဂါလီ, ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်, ရခိုင်ပြည်နယ်, မောင်တော. ARSALeaveaComment on မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ရှိ ဥပဒေအရ နေထိုင်ခွင့်မရှိသောနေရာတွင် လာရောက်နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီ ၆၅၀၀ ခန့်အား အကြမ်းဖက်သမားများပါရှိခြင်း ရှိ မရှိ စာရင်းကောက်ယူစစ်ဆေးမည်
Posted in NewsTagged မောင်တော. ARSALeaveaComment on မောင်တောမြို့နယ်၌ ARSA အကြမ်းဖက်သမားများ ထောင်ထားခဲ့သည့် လက်လုပ်မိုင်းများ မကြာခဏတွေ့ရှိရကြောင်း သိရ
အကြမ်းဖက်သမားများကိုလက်မခံရန် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူထားပြီး လက်ရှိတွင် အကြမ်းဖက်သမားနှစ်ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ မြန်မာဘက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ထား
Posted on January 24, 2018 January 25, 2018 by Eleven Media Group
အကြမ်းဖက်သမားများကို လက်မခံရန် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူထားပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ မြန်မာဘက်သို့ အကြမ်းဖက်သမားနှစ်ဦးကို လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိချက်အရ သိရသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ အကြမ်းဖက်သမားများအား ဖမ်းဆီးရမိပြီး လွှဲပြောင်းပေးမှုရှိ၊ မရှိ သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က “ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာရင်းတွေကို ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးလည်းသိအောင် ကြေညာထားပါတယ်။ သူတို့ဘက်ကတော့ အခုချိန်မှာ ကျွန်တော်သိသလောက် ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲပြောင်းပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ စဖြစ်ဖြစ်ချင်း အောက်တိုဘာ ၉ ရက် တုန်းကတော့ နှစ်ယောက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကတော့ရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း မူအားဖြင့်တော့ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို အားမပေးဘူးဆိုတာမျိုးတော့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပို့လိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူတို့ဆီကပြန်ကြားချက် တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိသေးပါဘူး” ဟုပြောကြားသည်။
ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင် ၁၃၀၀ ကျော်၏ အမည်စာရင်းကို မြန်မာဘက်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်သို့ ပေးပို့ထားပြီး မြန်မာအစိုးရဘက်မှလည်း အကြမ်းဖက်သမားများ၏ နာမည်နှင့် ဓာတ်ပုံတို့ကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှတစ်ဆင့် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထို့ပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ အင်တာပိုသို့လည်း ပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မြင့်က “အကြမ်းဖက်သမားကို လက်မခံဘူးဆိုတာ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီပြီးသားပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကလည်း သူတို့မြေပေါ်မှာ လက်မခံဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်း အကြမ်းဖက်သမားတွေကို လက်မခံဘူး။ အကြမ်းဖက်သမားဆိုတာမျိုးက ချိုပါတာမဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒီစခန်းတွေထဲမှာ ရှိနိုင်သလို အခြားမမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာလည်း ရှိနိုင်တာပဲ။ ဒါတွေကို နှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီး ဖမ်းပေးမယ်ဆိုပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနချင်းလည်း ညှိနှိုင်းသဘောတူညီပြီးသားဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလက လာရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအဆင့်လည်း လာမယ့်လမှာ သွားရောက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးဖို့ သဘောတူညီပြီးသားဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောကြားသည်။
Posted in NewsTagged မောင်တော. ARSALeaveaComment on အကြမ်းဖက်သမားများကိုလက်မခံရန် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူထားပြီး လက်ရှိတွင် အကြမ်းဖက်သမားနှစ်ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ မြန်မာဘက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ထား
Posted in NewsTagged ဘဂါင်္လီ, ရခိုင်ပြည်နယ်, မောင်တော. ARSALeaveaComment on တစ်ဖက်နိုင်ငံမှပြန်လာမည့် ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည်နေရာချထားပေးမည့် မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ကျေးရွာအချို့သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနှင့် UEHDR ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်တို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု
Posted on October 21, 2017 October 22, 2017 by Eleven Media Group
ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများဆိုင်ရာအေဂျင်စီက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့စ်ဘဇားသို့ နောက်ဆုံးသီတင်းရှစ်ပတ်အတွင်း အလုံးအရင်းဖြင့် ၀င်ရောက်လာသော ဒုက္ခသည်များ၏ ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြစ်သည့် ကလေးများ၏ဒုက္ခကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာကို ရေးသားသူ ဆိုင်မွန်အင်ဂရမ်က ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ကလေးငါးဦးလျှင် တစ်ဦးနှုန်းခန့်သည် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်သော အာဟာရချို့တဲ့မှု ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်ဟု ပြောကြားသည်။
ARSA ဘင်္ဂါလီအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုကို တုံ့ပြန်သည့် မြန်မာတပ်မတော်၏ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် သြဂုတ် ၂၅ ရက်နောက်ပိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးသွားသည့် ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်ဦးရေသည် ငါးသိန်းကျော် ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ပြောကြားထားသည်။
ထိုသို့ထွက်ပြေးသွားသည့် ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များထဲတွင် ARSA ဘင်္ဂါလီအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများလည်း ပါဝင်နေကြောင်း www.benarnews.org ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတင်းဗီဒီယိုတစ်ခုအရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ပြေးလာသည့် ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များကို စာရင်းရေးသွင်းရာတွင် အတင်းအကျပ် နေရပ်စွန့်ခွာရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Posted in NewsTagged မောင်တော. ARSALeaveaComment on ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များအနက် ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ကလေးများဖြစ်
Posted on September 18, 2017 by Eleven Media Group
၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်က နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက မောင်တောမြို့ တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ရှိ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးတစ်လျှောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်
ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများက သြဂုတ် ၂၅ ရက် နံနက် စောစောအချိန်ကစပြီး မောင်တောဒေသ အတွင်းမှာရှိတဲ့ နယ်ခြားစောင့်ရဲစခန်း ၃၀ ကျော်ကို တစ်ပြိုင်တည်း အင်အားသုံး တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ မြို၊ သက်၊ ဒိုင်းနက် အပါအ၀င် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း နဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေက အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား၊ လုံခြုံရေး ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ရေးအတွက် လမ်းတွေပေါ်မှာ မိုင်းတွေထောင်တာတွေ၊ တံတားတွေ ဖျက်ဆီးတာတွေကို ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် မောင်တောမြောက်ပိုင်းနေ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေက ရွာသားတွေဟာ အပြင်ထွက်မရဘဲ ပိတ်မိနေခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မောင်တောမြောက်ပိုင်းဒေသက တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေဟာ မြို့နယ်အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးလို့ ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်မှာ မောင်တောမြို့ အောင်မြေဗောဓိ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းမှာ အခြေချတဲ့ သင်္ဂဟကမ်းလက် ရက္ခိတအဖွဲ့နဲ့အတူ မောင်တော မြောက်ပိုင်းက ကျေးရွာတွေကို သွားပြီး ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေးခရီးမှာ လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။
နံနက်စောစော ၈ နာရီခန့်မှာ မောင်တောမြို့က စထွက်လာပါတယ်။ အရှေ့ဘက် မေယုတောင်တန်းကြီးကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နေမင်းကြီးကတော့ နေ့သစ်ကိုကြိုဆိုနေသယောင် ရှိပါတယ်။ မြို့ ၂ မိုင်လောက်သာဝေးတဲ့ မြို့သူကြီး ဘင်္ဂါလီရွာကိုဖြတ်တော့ လမ်းမြောက်ဘက် မီးလောင်ပြင်ကြားမှာ ဘင်္ဂါလီသုံးယောက်လောက်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ ကားလာတာကိုမြင်လို့ ရွာကနေ အေတာလျာရွာဘက်ကို ထွက်ခွာသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ မိုင်းလာထောင်တာလား၊ ဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲ ဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။ အမှန်တကယ်က မြို့သူကြီးရွာဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ကြီးစိုးတဲ့ရွာ ဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ် ၂၅ ရက် ၁၁ နာရီမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေက ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တာတွေ၊ ဆွဲမိုင်းတွေနဲ့ အဝေးကနေ မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲတာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ ရွာဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာ အကြမ်းဖက်သမား ဘင်္ဂါလီ အလောင်းတစ်လောင်းရရှိခဲ့တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သြဂုတ် ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက မောင်တောမြို့ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားတဲ့ ရွာသားနှစ်ဦးနဲ့ ပညာရေး ၀န်ထမ်းနှစ်ဦးဟာ မြို့သူကြီးရွာကို ဖြတ်သွားတာမှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုထိ ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ လုံခြုံရေးကားတွေကို ဖောက်ခွဲဖို့ ကားလမ်းပေါ်မိုင်းထောင်ထားပြီး မိုင်းထောင်တာတွေ့လို့ မိုင်းရှင်းဖို့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လာရောက်တဲ့အခါလည်း လူအုပ်စုနဲ့ ၀ိုင်းအုံတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ် ၊ လုံခြုံရေးယဉ်နောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါ လူအုပ်စုလိုက် ကားလမ်းအတိုင်းတက်လာပြီး သုံးမိုင် ပရဟိတ ကျောင်းနားသို့ ၀ိုင်းအုံတိုက်ခိုက်လာခြင်းတို့ ရှိခဲ့တဲ့ရွာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟိန္ဒူ ရွာသားတွေ မြို့သူကြီးရွာကိုအဖြတ်မှာ အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂါလီတွေဝိုင်းအုံလာလို့ တရားရုံး အဆောက်အအုံကိုဝင်ပြေးတဲ့အခါ ဟိန္ဒူတွေ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
သုံးမိုင်လမ်းဆုံကနေ မြောက်ဘက်ကို ခရီးစတာနဲ့ အန္တရာယ်ဆိုတာက ဘယ်က ဘယ်လို ရောက်လာမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်တာကြောင့် အားလုံးသတိရှိရှိ သွားခဲ့ရတာပါ။ သုံးမိုင်ရပ်ကွက်အလွန် သီဟိုတောထိပ် တောင်ကမူပေါ်မှာ တဲတွေကို မြင်ရပေမယ့် လူတွေမမြင်ရတော့ပါဘူး။ အဲဒီတောင်ကမူပေါ်က တဲထိုးနေကြတဲ့ မြိုတိုင်းရင်းသားတွေဟာ မနေရဲတော့လို့ သုံးမိုင်ပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီသီဟိုဠ်တောထိပ်ကရွာကို သီဟို အေးရွာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရွာသားတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ မောင်တောမြောက် ဖျားပိုင်းက ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ မြိုလူမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ရဲစခန်းသုံးခု အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ သူတို့ ကံသာယာရွာက ကျောင်းဆရာတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်သမားတွေ ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်လို့ သေနတ်ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အခြေချနေမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့တဲ့ မောင်တောတောင်ပိုင်း ကံသာယာ အထက်ရွာကနေ တစ်ရွာလုံးစွန့်ခွာပြီးတော့ အဲဒီသီဟိုဠ်တောထိပ်မှာ အခြေချ နေထိုင်တာ မကြာသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ တစ်တွေ အခြေချဖို့ ကြိုးစားနေစဉ်မှာပဲ ထပ်ပြီးပြေးကြရပြန်ပါပြီ။
သီဟိုဠ်တောထဲဝင်လို့ မိုင်ဝက်ခန့်သာသာမှာ သီဟိုဠ်တောထဲက သီဟိုဠ်နယ်ခြားစောင့်ရဲစခန်း ရှေ့ရောက်ပါတယ်။ သြဂုတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီ ၅ မိနစ်မှာ သီဟိုဠ်ကင်းစခန်းကို ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမား ၁၀၀ ခန့် လာရောက်ဝိုင်း ၀န်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဆက်ပြီးသွားတော့ နွားရုံတောင် ဘင်္ဂါလီရွာကို ဖြတ်ရပါတယ်။ နွားရုံတောင် ဘင်္ဂါလီနောက်မှာ ပြားသား ရခိုင်ရွာရှိပါတယ်။ ပြားသား ရခိုင်ရွာက ရွာသားတွေ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲ ကျီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားကြပါတယ်။ အဲဒီနွားရုံတောင်ရွာက ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ယဉ်တန်းကို အင်အားသုံး ၀ိုင်းဝန်း တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်၊ လက်လုပ်မိုင်းဆွဲဖောက် ခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တဲ့ ရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှာ လုံခြုံ ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လိုက်ပါလာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ဟာ နွားရုံတောင်ကျေးရွာအနီးအရောက်မှာ အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမား ၁၅၀ ခန့်က ဓားရှည်များ ကိုင်ဆောင်ပြီး ကားဘေး ဘယ်ညာ ၀ိုင်းဝန်း တားဆီးပိတ်ဆို့ အကြမ်းဖက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ပစ်ခတ်ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ၅ မိနစ်မှာလည်း သီဟိုဠ်ခြံအလွန် နွားရုံတောင်ကျေးရွာအ၀င် ကားလမ်းရောက်ရှိချိန်မှာလည်း ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားတွေက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကို လက်လုပ်ဆွဲမိုင်း မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နွားရုံတောင်ရွာထဲကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာ လူသူ ကင်းမဲ့နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပြီး စိုးတစ်ထိတ်ထိတ် ဖြတ်ခဲ့ရတာပါ။ ကျီးကန်းပြင် နယ်ခြားစောင့်ဌာနချုပ်ဂိတ်မှာ သတင်းပို့ပြီး ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျီးကန်းပြင်လွန်ရင် အောင်ယာယာ၊ အောင်မင်္ဂလာကျေးရွာတွေ ကို ရောက်ပါတယ်။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတချို့က ရရာကားတွေနဲ့ ဘူးသီးတောင်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားကြပေမယ့် တချို့ကလည်း ရွာမှာ နေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မင်္ဂလာကျေးရွာက လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ လိုက်ပါလာတော့ စိုးရိမ်စိတ် နည်းနည်းသက်သာရာရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အောင်မင်္ဂလာလွန်တာနဲ့ မောင်နှမ ဘင်္ဂါလီရွာကြီးကို သုံးမိုင်လောက်အထိ တောက်လျှောက် ဖြတ်ရမှာမို့လို့ပါ။ မောင်နှမဆိုတဲ့ရွာဟာ တကယ်တော့ ၁၉၄၂ ခုနှစ်မတိုင်မီမှာ ရခိုင်ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေက မောင်တောဒေသက ရခိုင်တွေကို လူလှိုင်းစစ်ဆင်ရေးနဲ့ လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်တာ လုပ်ခဲ့တော့ မနေရဲတော့ဘဲ အင်္ဂလိပ် အစိုးရအကူအညီနဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဒိုင်နာစပူအထိ ပြေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ရခိုင်ရွာပေါင်း ၉၈ ရွာတိတိ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့လို့ ရခိုင်ရွာ နာမည်သာကျန်ပြီး ဘင်္ဂါလီ ရွာကြီးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ မောင်နှမရွာဟာ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်အထိ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ကားတွေကို မိုင်းထောင်တာတွေ ဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ကလည်း မောင်တောမြောက်ပိုင်းကို ရိက္ခာသွားပေးတဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ သင်္ဂဟကမ်းလက် ရက္ခိတအဖွဲ့နဲ့ ဦးနေမျိုးဇင် စတဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ မောင်နှမ ကျေးရွာအရောက်မှာ မိုင်းတွေ့လို့ ဆက်မသွားတော့ဘဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရွာပါ။ မောင်နှမကျေးရွာဟာ ကားလမ်းဘေးတစ်လျှောက် သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ ပိန်းပိတ် အုပ်ဆိုင်းနေတဲ့ ရွာတန်းရှည်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီတွေက နေအိမ်တွေကို မီးရှို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာကြောင့် အခုဆိုရင် လူသူကင်းမဲ့နေတာကို ကျောချမ်းဖွယ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်နေရာက ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မလဲဆိုတာကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း အသင့်အနေအထားနဲ့ ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ မောင်နှမကျေးရွာ၊ သဲချောင်းကျေးရွာ စတဲ့ ရွာတွေကို ဖြတ်ပြီး နောက်မှာတော့ ဖားဝပ်ချောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာကို ရောက်ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေး ကားအလာကို မျှော်နေသူတွေ တွေ့ရပေမယ့် သူတို့မှာ ထွက်ပြေးဖို့ ကားအပြန်မှာ လိုက်ဖို့အတွက် အထုပ်တွေအပိုးတွေနဲ့ အဆင်သင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို စိတ်မကောင်းဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဖားဝပ်ချောင်း ကျေးရွာနဲ့ အထက်ပိုင်းကျေးရွာတွေ ဟာ သြဂုတ် ၂၅ ရက်ကနေ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်အထိ မောင်တောမြို့ကိုသွားမရဘဲ ပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ ရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးကားတွေ ရောက်လာတော့ အပြန်မှာ သူတို့လည်း လုံခြုံရာကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်အား သန်နေကြတာပါ။
“ကျွန်တော်က ဒီမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ကျောင်းဆရာပါ။ အခု အမျိုးသမီးလည်း မွေးဖို့ဖြစ်နေတော့ ဘူးသီးတောင်ကို သွားချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးကားတွေ အပြန်မှာ လိုက်ပါဖို့ စောင့်နေတာပါ။ ဒီမှာက ညဆို ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူး။ အားလုံး စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်”လို့ ဖားဝပ်ချောင်းကျေးရွာက ကျောင်းဆရာတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဖားဝပ်ချောင်းကျေးရွာမှာတော့ လုံခြုံ ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကားပေါ်က ဆင်းကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးကားကတော့ ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ ငန်းချောင်းကျေးရွာကိုအဖြတ်မှာတော့ ရွာထဲမှာ ဘင်္ဂါလီတွေ သွားနေတာကိုမြင်တော့ စိုးရိမ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတော့ စိတ်သက်သာရာ ရသွားပါတယ်။ လုံခြုံရေးတွေက လမ်းတစ်လျှောက်ရှိတယ်ဆိုလို့သာ ရှေ့ဆက်သွားခဲ့ရတာပါ။ နံနက် ၁၀ နာရီ ၅၀ မိနစ်မှာ လောင်းဒုံကျေးရွာအနားကိုလည်းရောက်တော့ ရုတ်တရက် ကားကို ရွာသားတချို့နဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က ရှေ့ဆက်မတိုးဖို့ ထားပါတယ်။ ကားပေါ်က ဆင်းကြည့်တော့ ရှေ့ကိုက် ၁၀ လောက် အကွာမှာ ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေ ထောင်ထားတဲ့ မိုင်းကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ တူးဖော်နေတာကို တွေ့ပါတယ်။ မိုင်းက ကားလမ်းပေါ်က ရွှံ့ ဗွက်တွေကိုတူးပြီး ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုင်းကိုဖော်လိုက်တေ့ာ ၀ိုင်ယာကြိုးတန်းကို တွေ့ရပါတယ်။ မိုင်းက ကားမိုင်းဖြစ်ပြီး ကားလာရင် လျှော့တိုက် ဖောက်ခွဲတာလို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို ကားမိုင်း၊ ဆွဲမိုင်းတွေကို ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီတွေက မောင်တောမြို့ နယ်တစ်လျှောက် လုံခြုံရေးကားတွေ သွားလို့ မရအောင် မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုင်းတွေကို ကားပီစတင်တို့၊ သံပိုက် တို့နဲ့ ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂါလီတွေဟာ မိုင်း လုပ်နည်းကို ကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့် ရောက်နေပြီဆိုတာ သက်သေပြနေပါတယ်။ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက မိုင်းနှစ်လုံးကိုတွေ့ရှိပြီး သက်မဲ့ လုပ်လိုက်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သြဂုတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၃ နာရီ ၂၅ မိနစ်မှာ လောင်းဒုံရွာထိပ်က နယ်ခြားစောင့် ကင်းစခန်းကို အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများက လာရောက်ဝိုင်းဝန်း ပစ်ခတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကင်းစခန်းကို မိုင်းတွေနဲ့ ပစ်ခတ် ဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
“ဖြစ်တဲ့နေ့က ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားတွေဝိုင်းပြီး ကင်းစခန်းကို တိုက်ခိုက်တယ်။ အဲဒီမှာလည်း ကင်းစခန်းထဲကို မိုင်း တွေကျလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မပေါက်ကွဲခဲ့လို့သာ ဘာမှမဖြစ်တာပါ။ ဒီကနေကလည်း ကျွန်တော်တို့ လမ်းပေါ်ထွက်ကြည့်တဲ့အချိန် မှာ ၀ိုင်ယာကြိုးကိုမြင်တော့ လုံခြုံရေးကို သတင်းပို့ ဖော်ကြည့်တဲ့အခါ မိုင်းကိုတွေ့တာပါ” ဟု လောင်းဒုံကျေးရွာသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
လောင်းဒုံကျေးရွာကနေ ဆက်သွားလျှင် ကြိမ်ချောင်းကျေးရွာကို ရောက်ပါတယ်။ ကြိမ်ချောင်းကျေးရွာမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အိမ်ထောင်စု ၈၀ ခန့်သာရှိပေမဲ့ ကျန်တဲ့ တစ်ရွာလုံးဟာ ဘင်္ဂါလီတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ် ၂၅ ရက်မှာ မိုင်းငါးလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကစလို့ တစ်ရွာလုံးက တိုင်းရင်းသားတွေဟာ နယ်မြေရဲစခန်းထဲ မှာသွားပြီး နေထိုင်နေကြရတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ကြိမ်ချောင်းရွာလယ် လမ်းဆုံ၊ ဆေးရုံရှေ့၊ ငါးဈေးတန်း၊ အထကကျောင်းရှေ့နဲ့ ရေ ကျော်တံတားအနီးတို့မှာ ပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ ကြိမ်ချောင်းရွာ လယ်လမ်းဆုံမှာ အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ ကားအလာကို စောင့်နေကြသူတွေ တွေ့ရပါတယ်။ မကြာခင်မှာ တောင်ပြိုလက်ဝဲက ဆင်းလာတဲ့ လုံခြုံရေးကားတွေနဲ့အတူ တောင်ပြိုဒေသခံတချို့ လိုက်ပါလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီကားနဲ့ပဲ ကြိမ်ချောင်းရွာက ဒေသခံတချို့ လိုက်ပါသွားပါတယ်။ ကြိမ်ချောင်းကနေ ဆက်ထွက်တော့ ဗန္ဓုလကျေးရွာသို့ သွားလမ်းနဲ့ တောင်ပြိုလက်ဝဲသွားတဲ့ လမ်းဆုံကိုရောက်တော့ ကယ်ဆယ်ရေးကား တစ်စီးက ဗန္ဓုလလမ်းအတိုင်း ရန်အောင်ပြင် ကျေးရွာအထိသွားပြီး ကျွန်တော်တို့ စီးလာတဲ့ ကားက တရိန်းကျေးရွာထိ ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်အောင်ပြင်ကျော်လမ်းကနေ ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးတွေကို လမ်းတစ်လျှောက် တွေ့ခဲ့ရပါ တယ်။ တရိန်းတံတားထိပ် ရဲကင်းစခန်းကို သတင်းပို့ပြီးတော့ တရိန်းကျေးရွာကို ဆက် သွားခဲ့ပါတယ်။ တရိန်းကျေးရွာသား လမ်းဟာ တော်တော်ကိုပျက်စီးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ တစ်ပေအထိနက်တဲ့ မြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့ ကားကိုမနည်း ရုန်းကာသွားရပါတယ်။ မောင်တောမြို့နဲ့ မိုင် ၂၀ ကျော်ဝေးတဲ့ ခရီးကို တရိန်းကျေးရွာဟာ ဒီအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ် မတိုင်မီက ရွာသား နှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသားတွေဟာ ရွာပြင်မထွက်ရဲဘဲ စိုးရိမ် ထိတ်လန့်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွာမှာတော့ လုံခြုံရေး ရှိနေတယ်လို့ သူတို့ပြောကြပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ ရွာသားတွေကတော့ တစ်ယောက်တည်းမပြေးဘူး။ ပြေးရင် အားလုံး ပြေးမယ်။ ဒီလို တိုင်ပင်ထားကြတယ်” လို့ တရိန်းကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
တကယ်တော့ မောင်တောဒေသမှာ နေထိုင်လျက်ရှိကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ လုံခြုံမှု အာမခံချက်မရှိဘဲ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု တွေနဲ့ နေ့ရက်တွေကို ကျီးလန့်စာစား ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှင်နေပေမဲ့ ဘ၀သေနေတဲ့လူတွေ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ လူတွေနဲ့ မခြားပါဘူး။ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်မြေမှာ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်စား သောက်ချင်ကြပေမဲ့ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်မှု ကို စိတ်ပိုင်းရော ရုပ်ပိုင်းပါ ခံစားနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နေမ၀င်ခင် မောင်တော အရောက်ပြန်ရမှာမို့ တရိန်းရွာသားတွေကို နှုတ်ဆက်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်အောင်ပြင် ကျေးရွာကိုသွားတဲ့အဖွဲ့ကားပေါ်မှာ ပိတ်မိ နေတဲ့ ကျောင်းဆရာတွေ ပါလာကြပြီး ကြိမ်ချောင်းရွာ နယ်မြေရဲစခန်းရှေ့ကို ရောက်တော့ ရန်အောင်ပြင်ရွာကနေ ကြိမ်ချောင်းရွာအထိ ခြေကျင်လမ်းလျှောက်လာကာ ကယ်ဆယ်ရေးကားနဲ့ မောင်တောကို လိုက်ပါဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ကျေးရွာသားတွေကို တွေ့ပါ တယ်။ သူတို့က လိုက်ပါဖို့ တောင်းဆိုတော့ ကားနဲ့ ခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ အသက် ၈၀ ကျော်အရွယ် အဘိုးအဘောင်တွေ၊ လသားအရွယ် ကလေးငယ်တွေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ကလေးငယ်တွေဟာ မိမိတို့နေရပ်မှာ မနေရဲတော့လို့ ထွက်ပြေးနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်ပြီးနောက် ၁၀ ရက် ကြာခဲ့တဲ့အချိန်မှာမှ မောင်တောမြောက်ပိုင်း ကျေးရွာသားတွေ နေရပ်စွန့်ခွာမှု ပြန်လည် စတင်လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်မှု၊ လုံခြုံရေး ပြတ်တောက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မောင်တော မြောက်ပိုင်းက တံတားကြီးခြောက်စင်းကို ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီတွေ ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းတွေကို မြောင်းတူးပြီး ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ လမ်းတံတား ဆောက်လုပ်ရေး အဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်တို့ပူးပေါင်းပြီး ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ တံတားတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးလို့ ကားတွေ သွားလာလို့ရပေမယ့် လမ်းတွေ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးနေတဲ့အတွက် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ကားတွေဟာ ခမောင်းဆိပ်မြို့အထိပဲ သွားလို့ ရပါသေးတယ်။ အပြန်ခရီးမှာ မိုးက တအားရွာတော့ အမိုးမပါတဲ့ကုန်တင်ကားပေါ်မှာ လိုက်ပါလာကြတဲ့ သူတွေအားလုံး မိုးရေထဲမှာ ဒုက္ခကိုယ်စီ ရောက်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရေကိုယ့်မြေ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာနေပြီး ခိုးဝင် အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂါလီရန်ကို ကြောက်လန့်ကာ အသက်လု ထွက်ပြေးနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘ၀ဟာ ရင်နာစရာကောင်းလှပါတယ်။ မီးရှို့မှုတွေ၊ ပစ်ခတ်သံတွေ မေယုတောင်ခြေမှာ ဆက်လက်ကြားနေကြသေးပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘ၀တွေလည်း လုံခြုံမှု မရရှိသေးပါဘူး။ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ စစ်တွေ နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့တွေအားလုံးမှာ မောင်တောဒေသက စွန့်ခွာလာကြတဲ့သူတွေ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိ ခိုလှုံနေကြတာ တိုင်းရင်းသား လူဦးရေ နှစ်သောင်းကျော်သွားပါပြီ။
ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သြဂုတ် ၁၅ ရက်ကနေ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်အထိ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှု ၉၇ ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦး၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းနှစ်ဦး၊ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ၂၁ ဦး စုစုပေါင်း ၃၆ ဦးနှင့် ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား ၃၇၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ၀င် ၁၅ ဦး၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်း သုံးဦး၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား လေးဦး စုစုပေါင်း ၂၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ် ရာရရှိခဲ့ပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၅၉ ရွာ၊ အိမ်အလုံးရေ ၆၈၄၂ လုံး မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း၊ တံတားရှစ်စင်း မိုင်ထောင် ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
မီးလောင်ပြင်တွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေ စနစ်တကျစီမံသွားမှာဖြစ်ပြီး မိမိတို့ နိုင်ငံဟာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၀င်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလို ထွက်လုပ်လို့မရဘဲ တစ်ဖက်နိုင်ငံကို ထွက်သွားသူတွေကိုတော့ စိစစ် လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဟာ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ကတည်းကနေ စိုးရိမ်သောကနဲ့ မလုံမခြုံနေခဲ့ရတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ကူလီအဖြစ် သနားစရာ ၀င်ရောက်လာတဲ့ စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂါလီတွေဟာ အနေကြာလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် အမည်သစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ကာ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေကို အကြမ်းဖက် တောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါပြီ။ ဒီ အကြမ်းဖက်မြေလုသူ ဘင်္ဂါလီတွေကို မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့အတူ အားလုံး တညီတညွတ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချ ၀ိုင်းဝန်း ရှင်းလင်းရမှာ ဖြစ်သလို အနောက်ဘက်တံခါးမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုအားလုံး ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းကြီးက နတ်မြစ်တစ်ဖက် ကမ်းနတ်တောင်ကို ငုပ်လျှိုးဖို့ မေးတင်နေချိန်မှာ မောင်တောမြို့ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မောင်တောမြို့ကြီးကတော့ ချောက်ချားဖွယ် တိတ်ဆိတ်လို့ နေပါတယ်။
Posted in FeaturesTagged ဘဂါင်္လီ, မောင်တော. ARSALeaveaComment on အန္တရာယ်ကြားက မောင်တောမြောက်ပိုင်းခရီး